FAQs - Spieth (Xiamen) Teknolojia Co., Ltd.
Pallet tsaina anao koa anefa System
Mifantina Pallet tsaina anao koa anefa
Roahy in Pallet tsaina anao koa anefa
Very Ilany aiza no Pallet tsaina anao koa anefa tery
Double Deep Pallet tsaina anao koa anefa
Gravity Flow Pallet tsaina anao koa anefa
Manosika Back Pallet tsaina anao koa anefa
Mezzanine Floor Pallet tsaina anao koa anefa
Cantilever Pallet tsaina anao koa anefa
Rafitra fitahirizana fitahirizana
Talantalana Rivet Boltless
Light Adidy Shelving
Long androm Shelving
Wire harato Products
Wire harato fitoeran-javatra
Wire harato Decking
Biby fitehirizana plastika
tsaina anao koa anefa Blog
Eny, isika iraisam-pirenena rehetra mitaky baiko mba manana mitohy mba ambany indrindra dia be. Raha mitady ny mivarotra fa amin'ny kely be dia be, dia manoro hevitra anao mampitombo ny be hanatratra ny tsara indrindra Price.
Ny fe-potoana dia tokony ho afaka 7 andro fiampangana sy hitandrina ihany ny vidin'ny entana.
Fa faobe famokarana
Ny fe-potoana dia 20-30 andro aorian'ny fandraisana ny fametrahana fandoavam-bola. Ny fitarihana mahomby fotoana lasa, rehefa (1) no nandray ny petra-bola, ary (2) manana ny fankatoavana farany ho an'ny vokatra. Raha toa hitarika ny fotoana tsy miasa amin'ny fetra farany, masìna ianao, mba hita ny fepetra takiana amin'ny fivarotana. Amin'ny toe-javatra rehetra, Hiezaka isika mba handraisana ny zavatra ilaina. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra isika dia afaka manao izany.
Afaka manao ny fanonerana ho an'ny banky, T / T, L / C:
Fiantohana ny tsaina anao koa anefa isika SY SHELVING for 5-Taona olombelona afa-tsy ny fandidiana dratsy.
Ny fanoloran-tena dia ny fahafaham-po amin 'ny vokatra. Ao amin'ny fiantohana na tsia, dia ny kolontsaina izay namanay ny adiresy sy ny hamaha ny olana rehetra mpanjifa ny fahafaham-po ho an'ny rehetra
Eny, isika hampiasa foana kalitao avo fanondranana fonosana.
Ahoana no mametraka ny racks?
Tsy manome antsipirihany hametraka fampianarana isan-karazana talantalana. Raha ilaina, isika koa dia manome maimaim-poana lahatsary injeniera.
Inona no Hataoko fa ny velona teny nindramina?
(1) Ny haben'ny ny trano fanatobiana entana?
(2) Pallet lafiny fitoeran'entana: Haavo * Lalina * Length?
(3) Inona no maro sosona?
(4) Loading anivon'ny fahafahan'ny tsirairay? (Raha azo atao, afaka katsaram-panahy ianao, lazao amiko izay ny entany ireo?)
(5) Ny loko RAL?
(6) Firy bays (milentika)?
Isika dia mpanamboatra sy ny mpamatsy ny isan-karazany ny indostria sy ara-barotra sy ny fitahirizana fitaovam-tsaina anao koa anefa ny rafitra fitaovana manazava nanomboka tamin'ny 2001. rehetra anjara ianao mividy amin'ny Spieth tsaina anao koa anefa dia nomena 10 taona Warranty.
Tongan Park, Tongan District, Xiamen, Sina
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved.闽ICP备17021624号 Hot Products - Sitemap - DIEM Mobile
Warehouse Pallet tsaina anao koa anefa System , Warehouse Storage Racks , Pallet tsaina anao koa anefa Uprights , trano fitehirizana Pallet fitoeran'entana , Pallet tsaina anao koa anefa mpiaro , Foldable Wire harato fitoeran-javatra ,